Dhallinyaro ku hamineysa ka mid noqoshada Baarlamaanka oo hoggaamiyaasha siyaasada ugu baaqay in laga shaqeeyo doorasho nabad ah – Kalfadhi
Madaxda maamul-gobolleedyada dalka oo dhammaantood ku sugan magaalda Muqdishu iyo madaxda dowladda federaalka, ayaa dhowaad shir looga hadlayo dhammeystirka heshiiskii 17 September uga furmi doonaa magaalada Xamar.
Maxmed Ibraahim iyo Xamsa Axmed, oo sannadkan ku haminaya kamid noqoshada Golayaasha Baarlamaanka ayaa Kalfadhi u sheegay in dalka aysan u wanaagsaneyn xaaladda uu hadda marayo iyo kala shakiga ay muujinayaan madaxda labada heer.
“Doorasho heshiis lagu yahay ayaa fursad u ah dhallinyarada manta dalka joogta, maxaa yeelay qaab kasta oo wadiiqo sax ah ayaa ay ku raadsan doonaan boosaska ay doonayaan”, sidaasi waxaa yiri Maxamed Ibraahim.
Dhinaca kale Xamsa, ayaa aaminsan in tirada dhallinyarada uu ku jiro hamiga kamid noqoshada Golayaasha sharci dejinta in ay aad usoo kordhayeen sannadihii lasoo dhaafay.
“Waxaan ugu baaqayaa madaxda labada heer ee dowladda in ay markan fursad na siiyaan, anniga oo ku hadlaya magaca dhallinyarada Soomaaliyeed si aan kaalinteeda dowlad dhisida aan u muujiyo” ayuu Xamsi yiri.